Wada hadaladii Somaliland iyo KHaatumo u dhaxeeyey oo qodobo laga soo saarey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Wada hadaladii Somaliland iyo KHaatumo u dhaxeeyey oo qodobo laga soo saarey.
Wada hadaladii Somaliland iyo KHaatumo u dhaxeeyey oo qodobo laga soo saarey.
Wada hadaladii ay lahaayeen maamulada Soomaaliland iyo Khatumo ayaa laga soo saaray qodobo la sheegay in labada dhinac isku afgarteen.
Qodoban ayaa dhinaca kale muujinaya in wali wada halada sii soconayaan oo aysan dhamaan.
Qodobada ayaa u dhignaa sidan :
2-Waxaa si Buuxda la iskula Qaatay In howlaha Abaaraha iyo Horumarinta Deegaanadaasi la isga Kaashado si wada Jir ah.
3- Waxaanu Si wada Jir ah ugu Baaqaynaa in Hay’adaha Caalamiga ah iyo Kuwa Maxaliga ahba inay ka Howlgalaan Dhamaan Gobolada iyo degmooyinka aanay Hore u tagi Jirin, Halkaasi oo imika ayna wax Nabad-gelyo Daro ah ka Jirin, Loona sameeyo Gudi wada Jir ah.
8- Waxaa la isla qaatay in yoolka Wada-hadalkan uu Saldhig u yahay Is-aamid, Wada-shaqayn, Nabadgelyo Iyo Horumar dhankastaba ah.
Qodobadan waxaa dhanka khaatumo usaxeexay gudoomiyaha barlamaanka maxamuudu sh omar dhanka snm wasiir u dawlaha arrimaha dibada maxamed mixile bokhoro
Qodobadan ayaa si weyn markiiba dadka siyaasada odorosaa ay sheegeen in aan wax heshiis ah oo ka duwan kii ugu horeeyey ee labada dhinac yeeshaan ee ka dhacay Addis Ababa waxba ka bedelayn, arintaasna waxay muujinayaan in bay leeyihiin dhabta wadahadalka aan weli la gudagelin ama aan dadka loo sheegin
Isku day dhawrjeer aan la samaynay masuuliyiinta labada dhinac ee ku sugan Jabuti ayaan noo suura gelin.
Previous articleTiro Madaafiic ah oo maanta kusoo dhacdey agagaarka Madaxtooyada Soomaaliya.
Next articleMaamulka Ahlu Sunna oo ku baaqey in dib loo dhigo Doorashada M/weynaha G/mudug.